Deenmark: Xisbiyo isku raacay in sharciyada laga qaado waalidiinta carruuraha dhaqan celin u geeyo dalalkoodii | Somaliska
Deenmark: Xisbiyo isku raacay in sharciyada laga qaado waalidiinta carruuraha dhaqan celin u geeyo dalalkoodii
Qaar ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee dalka Deenmark, ayaa isku waafaqay in sharciyada laga cesto qoysaska caruurrahooda dhaqan celinta u geeyo dalkii ay ka soo jeedeen. Sidaas waxaa shaaca ka qaaday wargeysyada Berlinske ee ka soo baxa dalkaasi Deenmark.
Asxaabtan ayaa sidoo kale isku raacay in waalidiintii talaabo dhaqan celis ah qaado in iyagana lagala noqon doona sharciayda islamarkaasina dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen lagana reeban doona carruurahooda. Mowqifka asxaabtan ayaa haatan wuxuu noqonaya mid xoojinaya hindise uu horey xisbiga xag jirka ah DF u soo bandhigay oo salka ku heeysa sharci kala noqoshadda waalidiinta carruurahooda dhaqan celinta u geeya dalalkoodii ay asal ahaan ka soo jeedeen.
Saddexan xisbi ayaa sidoo kale ah xisbiyo cod aqlibiyad ku leh baarlamaanka dalkaasi, ayaa la rusan yahay in haddii ay baarlamaanka hor dhigaan noqon kara mid la aqbalo. Muranka ku saabsan dhaqan celinta ayaa waxeey aheyd mid ka taaganeyd dalkaasi in muddo ah, waxaase dabka bansiinka ku sii shubay markii gabdho soomaalida Deenmark ah lugu celiyey magaaladda Hargeysa, halkaaso oo dhaqan celin loo geeyey. Gabadhan iyo carruuro kale oo dhiganayey dugsi quraan ayaa howl gal ay boolisku ku qaateen dugasigaasi ka soo furteen carruuro laga keenay qurbaha oo ay ka mid ahaayeen labbo gabdhood oo heeystay dhalasho deenish ah.
Go’aanka xisbiyadan ayaa walaac ku riday qoysas badan oo qorsheynaya in xilligga xaggaaga ay carruuraha dalalkoodii ay u kaxeeyaan si ay eheladooda u salaamaan una soo bartaan dalalkii hooyo. Sanad walbana qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa la rusan yahay iney fasax ku aadaan dalkii hooyo.